Project Detail - Find Property
Theik Pan Lann Mini Condo
?? ရန်ကုန်မြို ့ရဲ့Downtown ၆ မြို ့နယ်ထဲမှာ ပါ၀င်ပြီးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးနဲ ့စိတ်ချမူအခိုင်အမာ ရရှိပြီးသော Maggin Construction က ဆောက်လုပ်ပြီးသား အခန်းလေးတွေကို စိတ်၀င်စားတဲ့ လူကြီး မင်းတို ့တွက် သတင်းကောင်း ??
? Master Bedroom (2) ခန်း နဲ့Single Bedroom (1) ခန်း ပါ၀င်ပြီး BCC လဲ ကျပြီးသားဆိုတော့ ငွေချေပြီး အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသားအခန်းလေးမှာ နေယုံပဲနော် ?
? လိပ်စာလေးကတော့ အမှတ်(၇၉)၊သိပ္ပံလမ်း၊ဂဋ္ဌုန်ရပ်ကွက်၊အလုံမြို ့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာဆောက်လုပ်ထားသော Mini Condo လေး ဟာဆိုရင် ပါဝင်တဲ့ Facility တွေက လဲ ပြောစရာမလုံအောင်ပြည့်စုံနေပြီး အနီးနားမှာဆိုရင်လဲ အိမ်ရှင်မတို ့အတွက် သိပ္ပံဈေးနဲ ့ဆင်မင်းဈေးကလဲ ရှိနေသေးတဲ့အပြင်
‌?? ငွေထုတ်ငွေလွှဲဖိို ့တွက် Bank တွေဖြစ်တဲ့ KBZ , AYA , UAB , Myanmar Economic Bank , MOB Bank တွေ ကလဲ စုံနေပြီး
? ကားချစ်တဲ့ကိုကို မမတို ့တွက် သီရိမင်္ဂလာဈေးအဟောင်းကြီး မှာရှိတဲ့ Car ပွဲစားတန်းကလဲ ရှိနေတဲ့အပြင် Jasper Motor Car Sale Center ကြီးကလဲ အသင်​့​နော်​
? 24 Hours Convenience Store ​လေး​တေ​ွရှိနေတဲ့ အပြင်
? ကျန်းမာရေး အတွက် စိတ်မပူရအောင် အနီးနားမှာ Academy Hospital က လဲ ရှိသေးတယ်
? လူကြီး မင်းတို ့ရဲ ့လိုသေးသေးချက်မရှိအောင်အစွမ်ကုန်ကြိုးစားနေပြီး အရည်သွေး အပြည့်မီနဲ ့စိတ်ချ ယုံကြည်စွာနဲ့ ၀ယ်ယူနိင်သော နေရာလေးဖြစ်အောင် Maggin Construction မှ အခန်းလေးကို လို ချင်တယ်ဆိုင်တော့ အခုထဲက လာခဲ့ဖို ့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ?
☎️ 09 784378775, 09 972991507, 09 43127250, 09 73151876
? အမှတ်(၅၁) မြေညီ(ယာ)၊ အောင်သပြေလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်